Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – कालो धन माथि गरिएको सर्जिकल स्ट्राइकको प्रभाव अब पेन्सनधारीहरु माथि
कालो धन माथि गरिएको सर्जिकल स्ट्राइकको प्रभाव अब पेन्सनधारीहरु माथि
Dec 04, 2016 DT Admin Politics, Top News Comments Off on कालो धन माथि गरिएको सर्जिकल स्ट्राइकको प्रभाव अब पेन्सनधारीहरु माथि
देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा कालो धन माथि गरिएको सर्जिकल स्ट्राइकको प्रभाव अब पेन्सनधारीहरु माथि पनि पर्न गएको छ ।
आज यस्तै घटना लुकसान स्थित यूको बैंक अनि केरन डाक घरमा देख्न पाइयो । चालु महिना सकिए पछी यूको बैंक लुकसान बजारको शाखामा डुवर्स भरी बाट नै पेन्सन थाप्न राज्य अनि केन्द्र सरका अधिन रहेका कर्मचारीहरु यहाँ आउने गर्छन ।
साथै कमानका पनि अनेकौं पेनसनधारीहरुको खाता यहाँ रहेको छ । तर यसपाली यहाँ पेन्सनधारीहरुले पाउने रकम नपाएकाले शाखमा हो हल्ला मचाएका थिए ।
भारती सैनिक सेवाबाट १९७९ मा सेवानीवृत भएका आशपाती बहादुर लिम्बूले मासिक १५ हजार पेन्सन पाउने गर्थे । तिनी लामो समय सम्म लाइनमा बस्छन ।
तिनी बैंकको काउटरमा पुगे पछी जब तिनले २ हजार रुपयामा मात्र पाए त्यपछी रनथनिन्दै वाहिर निसकेर होहोल्ला मचाए अनि बैंक कर्तृपक्षलाई सके सम्म गाली गलौज तिनले गरेको देखियो ।
पत्रकारको एक प्रश्नको उत्तरमा तिनले भने देशको सेवा गरेवापत हामी सैनिकले पेन्सन पाउछौं । त्यही पैसाले हाम्रो घर परिवारको सारा खर्च चल्ने गर्छ ।
अब १५ हजार पाउने ठाउँमा २ हजार थापेर चै राशनपानीको बाँकी तिर्नु की औषधी पानीको पैसा तिर्नु । बैंकले यो के गरेको भन्दै बैंक अधि नै तिनले खोइरने खने । लुकसान बजार यूको बैंक शाखाका प्रबंधले भने बैंकमा पैसा छैन ।
हामीले कहाँबाट दिने जति फण्ड छ त्यहीबाट सबैलाई अली आली गर्दै भुक्तान गरिएको तिनले बताए । यूको बैंकमा मात्र १० हजार भन्दा अधिक पेन्सनधारी रहेको पनि प्रवन्धकले जनाकारी गराए ।
एता केरन डाक घरमा पनि एउटै दृष्य देखिएको थियो । टाडा टाडा बाट आएका पुरुष अनि विद्यवा महिलाहरु रिक्तै नै घर फर्किन परेको रेलवे कर्मचारी की पतनी कलावती छेत्री अनि फुलमाया प्रधानले बताइन ।
दिन भरी डाकघरमा उभियौं पछी पोष्ट मास्टरले मात्र एक हजार रुपया मात्र पेन्सनको रकमबाट दिएको तिनले जनाइन ।
बाँकी रमक केही दिन पछाडी दिने बताइएको तिनले थप जनाइन । यसपछी तिनी डाकघरबाट औला बाँचदै घर तीर लागीन ।
गरिब जनताको विकासको निम्ति गरिएको यस सर्जिकल स्ट्राइकले अमीर भन्दा पनि मध्यमवर्गका मानिसहरु नै धेरै पीसिन लागेको आजको घटनाले दर्शाएको छ ।
Missing Brake Lights Nearly Caused Accident GJVM Wins #Darjeeling Govt College Elections Unopposed
13,394 total views, 2,193 views today
29,607 total views, 2,194 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 29,616 total views, 2,179 views today Comments comments
29,616 total views, 2,179 views today
29,590 total views, 2,173 views today
29,594 total views, 2,174 views today